चलचित्र 'चौका दाउ' को टोलि हेटौडामा ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical online media
चलचित्र ‘चौका दाउ’ को टोलि हेटौडामा !
प्रकाशित: १८ पुष २०७५, बुधबार
चलचित्र ‘चौका दाउ’ को टोलि देश दौडाहाको क्रम्मा ३ नम्बर प्रदेश राजधानी हेटौडा आईपुगेको छ । मंगलबार हेटौडाका पत्रकारहरुसंग साक्षात्कार गर्दै चलचित्रले कमेडी कथा उठान गरेको बताईएको छ । चलचित्र पत्रकार संघ मकवानपुरले संयोजन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चलचित्रका निर्देशक पुणेन्द्र झाले नेपाली समाजमा हुने गरेको यथार्थ घटनालाई हास्यव्यंङ्यको रुपमा चलचित्रमा देखाईएको बताउनु भएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यका आसपासमा छायाँकन भएको ‘चौका दाउ’ मा करोड माथिको लगानि रहेको बताउदै चलचित्रले उठान गरेका बिषय बस्तु यर्थातपरक रहेको निर्देश्क झा ले बताए । उनले चलचित्रको गीत र टेलरबाट राम्रो प्रतिकृया आएको बताउदै चलचित्र हेर्दा कुनै बोर फिल नहुने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चलचित्रकी नायिका वर्षा राउतले यस चलचित्रले समाजमा हास्यवंङय मार्फत सकारात्मक सुचना दिनेमा आफुले विश्वास लिएको बताईन ।
उनले सिनिएर कलाकारहरु संग काम गर्दा आफुलाई भाग्यमानी रहेको बताउदै चलचित्र राम्रो बनेको बताईन । आफु चार जना कलाकारको दाउमा पर्ने मेजर भुमिकामा रहेको बताउदै नजानेर गरीने गल्तीले भबिष्यमा आउने अप्ठयाराहरु संग गर्नुपर्ने सामाना चलचित्रमा रहेको बताईन । यस्तै कार्यक्रममा कलाकार सन्तोष पन्तले लामो समय पछि आफुले सोचेको र आफुलाई फिटहुने चलचित्रमा काम गरेको भन्दै मुख्य जिम्बेवारी चलचित्रमा बहन गरेको बताए । उनले पहिलो पटक चलचित्रको प्रोमोशनका लागी हिडेको बताउदै यस्ता टुर कार्यक्रमले प्रतयक्ष रुपमा आफुलाई पत्रकार र दर्शकहरु संग नजिक हुने वाताबरण बन्ने बताए । यो चलचित्र आगामी पौष २७ गते देखी प्रर्दशनमा आउने बताईएको छ ।
बितरकले चलचित्र लिन नमानेपछि कानुनी उपचार खोज्दै मोफसलका निर्माताहरु
दुर्गा खरेलको स्वरमा सन्नी लियोनको आकर्षक डान्स
काँचुलीको छायांकन सगैँ सम्पादन हुदैँ
शुक्रबारबाट देशभरका चलचित्र हलमा ‘झट्का’ लाग्दै (भिडियो)
चलचित्रकर्मी कल्याणकारी कोषलाई तीन आमाको पुरस्कार
चलचित्र ‘मारुनी’को ‘जाम्न माया जाम’ सार्वजनिक (भिडियो)